कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न माग | enews off
Home भर्खरै कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न माग
कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न माग
काठमाण्डौं, भाद्र १०
प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले चाँडोभन्दा चाँडो क्रियाशिल सदस्यताको नामावाली सार्वजनिक गर्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको आज (बिहीबार) साक्षात्कारमा बोल्दै नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदिशनरसिंह केसीले आफूहरु महाधिवेशनको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले महाधिवेशन भाँड्न खोजेको होईन । हामीले सभापतिहरुले पटक–पटक मिटिङ गर्ने काम गर्यौं । नेताहरुलाई विशेष महाधिवेशन गरौं भन्यौं, अर्ली महाधिवेशन गर्ने हो भनेपनि गरौं भन्यौं, पछि टाईम्ली महाधिवेशन गरौं भन्यौं । हामीले विगत तीन वर्षदेखि यो कुरा भन्दै आयौं, सुझाव दिँदै आयौं । तर, नेतृत्वले हाम्रो कुरा सुनुवाई गरेन । अहिले हामी धर्नामा छौं । हाम्रो विचार ८ लाख ५० हजार क्रियाशिल सदस्यहरुको विचार हो । धर्नामा बस्दापनि पार्टीले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हिजोदेखि हामी निरन्तर धर्नामा छौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले पार्टीले तत्काल क्रियाशिल सदस्यताको नामावाली सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मतदाताको नामावाली सार्वजनिक हुनुपर्छ, आजसम्म मतदाता को हो भन्ने कुरा थाहा छैन् । मेरो नाम छ कि छैन ? मलाई थाहा छैन् । क्रियाशिल सदस्यता सार्वजनिकीकरण गरिदिनुहोस भन्यौं । जिल्लाबाट विधिसम्मत् रुपमा क्रियाशिल टुँगो लगाएर पठाएको विषयमा पनि केन्द्रबाट प्रविधिको दुरुपयोग गरेर नाम हालिएको छ भन्ने कुरा आएको छ, यदि हो भने त्यो सच्याउनुपर्छ ।’
त्यसरी नाम सच्याउँदा दाबी÷विरोध गर्ने र सच्याउने मौका दिनुपर्ने पनि आफूहरुको अर्को माग रहेको केसीको भनाई छ । उहाँले आफूहरुले अघि सारेका तीन बुँदे माग आम नेपाली कांग्रेस पक्षधरको आवाज भएको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले रिले अनशनमा बसेका छौं । यो कुरालाई कसले उचित र कसले अनुचित भने भन्ने कुरा ठूलो होईन, हामी अधिवेशन भाँड्ने होईन । निर्धारित मितिमा पार्टीको महाधिवेशन भएन । कांग्रेसको वैधानिकता बचाउने कुरा सभापतिले हो । उहाँलाई जिम्मा दिएका छौं । नेतृत्वले कलंक व्यहोर्नुपर्छ । अहिले अधिवेशन गर्न नचाहने भनेको अहिलेको नेतृत्व नै हो । हामीले पटक–पटक अधिवेशन र विशेष अधिवेशन गर्न माग गर्दा उहाँले चाहनुभएन । आजसम्म क्रियाशिल सदस्य को हो ? भन्ने कुरा थाहा छैन् ।’
उहाँले पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकको समितिले बुझाएको क्रियाशिलको प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा मात्रै सहमति गरेकोले व्यवहारिक रुपमा समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
रामेछापका सभापति लवश्री न्यौपाने पनि तत्काल क्रियाशिल सदस्यताको नामावली तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदाता नामावाली सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मतदाताको नामावली प्रकाशनपछि मात्रै अधिवेशनको सुरुवात गर्नुपर्छ । मेरो रामेछापमा क्रियाशिल विवाद छैन् । आज बन्द कोठामा राखेर क्रियाशिल सदस्यता पठाउने भन्ने कुरा पनि आएको छ, तर यो कुरा हामी मान्दैनौं ।’
उनले आफूहरु अधिवेशनको विरोधी नभएको पनि जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अधिवेशनको कुनैपनि हालतमा विरोधी होईनौं, अहिले र भोलिपनि अधिवेशन गर्न जान्छौं ।’
त्यस्तै धादिङका सभापति रमेश धमलाले क्रियाशिल सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आफूहरु पार्टीको हितमा नै केन्द्रित भएर लागेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्लाबाट सिफारिश भएअनुसार क्रियाशिल सदस्यता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वैधानिक दृष्टिकोणमा कांग्रेस अप्ठ्यारोमा छ । यो विषय आम कार्यकर्ताको बीचमा उठेको छ । हामी पार्टी जोगाउन चाहन्छौं । यो पार्टी नेतृत्वमा रहनेहरुको मात्रै होईन । यो पार्टीलाई आशाको केन्द्र बनाउनुपर्छ । यो अभियानमा काम गरेका छौं ।’
उहाँले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको दृष्टिकोणमा पनि कांग्रेस सक्षम, योग्य र जनताले भरोसा गर्न योग्य बनाउन आफूहरु लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेतृत्वले अहिले हाम्रो महाधिवेशनको अधिकार कुण्ठित गर्नुभयो । विधानको व्यवस्था खारेजी गर्नुभयो । बाध्य भएर रिले अनशनमा बसेका छौं । नेताहरुसँग हाम्रो समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य छ । उहाँहरुले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुहोला ।’
Previous articleमहाधिवेशनको माहोल बनाउनुपर्ने बेला धर्नाको औचित्य छैन – सभापति थापा
Next articleनागरिक समाज सञ्जाल भक्तपुरले चाँगुनारायण नगरपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाए